OFakazi BakaJehova Baqala Ukwakha EWarwick, ENew York
ULIMI ISpanishi Isi-Albania Isi-Armenia Isi-Azerbaijani Isi-Azerbaijani (SesiCyrillic) Isi-Estonia Isi-Indonesia Isi-Isoko Isi-Ukraine IsiBhunu IsiChewa IsiCroatia IsiCzech IsiDanishi IsiDashi IsiFinishi IsiFulentshi IsiGeorgia IsiGreki IsiHungary IsiJalimane IsiJapane IsiKinyarwanda IsiKorea IsiLithuania IsiMalagasy IsiNgisi IsiNorway IsiNtaliyane IsiPedi IsiPolishi IsiPutukezi IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbia (SesiRoma) IsiShayina SesiMandarin (Esenziwe Lula) IsiShayina SesiMandarin (Sezinhlamvu Zakudala) IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (SaseLesotho) IsiSwahili IsiSwidi IsiTagalog IsiTsonga IsiTswana IsiTurkey IsiXhosa IsiZulu
OFakazi Baqala Ukwakha Endlunkulu Yomhlaba Wonke Entsha EWarwick, ENew York
ENEW YORK—OFakazi BakaJehova baqale ukwakha ngokusemthethweni endlunkulu yabo yomhlaba wonke eWarwick, eNew York ngoMsombuluko ku-July 29, 2013, ngemva kokuthola imvume yeziphathimandla.
NgoLwesithathu, ngo-July 17, i-Town of Warwick Planning Board yagunyaza ngazwilinye ipulani lesakhiwo sendlunkulu entsha yoFakazi, kwabe sekudingeka ukuba kutholakale amaphepha agunyazayo ukuze kuqalwe umsebenzi wokwakha. La maphepha atholakale ngemva kweminyaka emine oFakazi bathola indawo eWarwick ngo-July 17, 2009. Ngemva kokuthola imvume yokuqala yokwakha ngoLwesihlanu, ngo-July 26, oFakazi baqala ukusebenza esakhiweni nokugubha imigodi yokwakha isisekelo ngoMsombuluko, ngo-July 29.
Ukuzimisela koFakazi ukusebenzisa imiklamo yesakhiwo eyenza kube lula ukusinakekela kwaba nomthelela ekutholeni imvume kubaqondisi bokwakheka kwedolobha. Ngokwesibonelo, leyo mizamo izohlanganisa ukufakwa kwezinto ezivimbela ukungcoliswa kwamanzi nokukhukhuleka komhlabathi futhi zivikele izitshalo nezilwane, njengezihlahla nezinyoka ezibizwa ngokuthi ama-rattlesnake, ezizoba kude nendawo okwakhiwa kuyo.
“Kusijabulisa ngempela ukuqhubeka sisebenzelana nabezomthetho eWarwick nokuqhubeka nomsebenzi,” kusho uRichard Devine, umkhulumeli woFakazi. “Ukuthola imvume kubaqondisi bokwakheka kwedolobha kuyisinyathelo esisemqoka ekuthutheni indlunkulu yethu yomhlaba wonke eBrooklyn iye eWarwick.” U-Enrique Ford, oyilungu lekomiti yoFakazi yomsebenzi wokwakha noMnumzan’ uDevine, uthi: “Ukuthola leli pulani lesakhiwo kanye nemvume engatholwa yinoma ubani yokwakha, kwaba isinyathelo sokuqala esikhulu sokuhlela umsebenzi ukuze sifinyelele umgomo wethu wokuqeda lo msebenzi ngemva kweminyaka emine.”
Le ndawo yayikade isetshenziswa i-International Nickel Company ngezinjongo ezihlukahlukene, ezihlanganisa ihhovisi layo eliyindlunkulu nesakhiwo socwaningo nentuthuko, kusukela ngo-1960 kuya ku-1987. Ngemva kweminyaka emine ithuthile, yathathwa i-King’s College ngenhloso yokuba iyiguqule ibe ikolishi. Leyo mizamo ayizange iphumelele, futhi le ndawo yahlala ingenamuntu iminyaka engaphezu kuka-20 yaze yathengwa oFakazi ngo-2009.